Akanjo miaro, lamba fiarovana, akanjo anaovana fiarovana - FCE
Loko, endri-javatra, fitoviana, faharetana ary habe voafidy tsara.
Mampiasà lamba fanoherana ny static, mety tsara amin'ny indostrian'ny petrochemical.
Arovy ny tenanao amin'ny loza.
Miaraka amin'ireo isan-karazany mifangaro sy ny fandaharam-potoanan'ny microlot izay miova mandrakariva, nofononinay ianao.
Akanjo fiasana ankapobeny
Miaraka amin'ny QMS tonga lafatra sy ny rafitra miasa mifandraika amin'ny fiarovana, Hebei FCE no orinasa voamarina miaraka amin'ny mari-pahaizana momba ny fiarovana manokana LA nankatoavin'ny State Administration of Work Safe.
HEBEI FCE FIAROVANA FIARAHANA FIARAHAM-PANAHY & FIOMPIASA ACCESSORIES Niorina tamin'ny taona 2009 antsoina hoe Hebei FCE Intertrade Corporation. Tamin'ny 2014, niova amin'ny anarana ankehitriny isika. Ny biraontsika dia miorina ao amin'ny Distrikan'i Chang'an, Shijiazhuang City, faritanin'i Hebei, Sina.
Vaovao | Jan-14-2021
Te hahafantatra bebe kokoa momba anay ve ianao? Avy eo misoratra anarana amin'ny mailakao.